यस्ता संकेत देखिए सम्झनुहोस् तपाईंको जीवनमा सफलता प्राप्त हुदैछु ! – Sandesh Munch
कुनै पनि व्यक्तिको पैसासँग जोडिएको इच्छा कहिले पुरा होला ? धनकी देवी महालक्ष्मीको कृपा कहिले मिल्ला ?यो जान्नका लागि ज्योतिष शास्त्रमा केही संकेतबारे उल्लेख गरिएको छ।
मान्यता छ कि जहिले पनि यस्ता संकेत देखिन्छन्, त्यतिबेला सभ्झिनु पर्छ कि व्यक्तिलाई धनकी देवी लक्ष्मीको कृपा मिल्नेवाला छ।यस्ता छन् संकेतहरुः–बिहानै उठेर तपाईको पहिलो नजर दुध या दहीले भरिएको भाँडोमा पर्छ भने सम्झनुहोस् केही शुभ हुनेवाला छ।–विहानै शंख, मन्दिरको घन्टीको आवाज सुनिनु पनि शुभको संकेत हो।
–यदि कुनै व्यक्तिलाई विहान उठ्नेवित्तिकै उखुको बोट तथा उखु देखिन्छ भने पनि भिवष्यमा धन सम्बन्धी मामलामा सफलता प्राप्त हुने छ।–यदि कुनै व्यक्तिलाई सपनामा पटक-पटक पानी, हरियाली, लक्ष्मीको वाहन उल्लू देखिन्छ भने सम्झनुहोस् कि आउने समयमा तपाईको धनसम्बन्धी सबै समस्या हट्ने छ।
यदि तपाई कुनै काम विशेषका लागि बाहिर निस्किनुभयो र बाटामारातो सारीसहित सोह्र श्रृंगारमा कुनै महिला देखिइन् भने यो पनि महालक्ष्मीको कृपाको इसारा हो । विहान विहानै यस्तो देख्न पाइयो भने त्यो दिन तपाईका लागि महत्वपूर्ण बन्ने छ।
यो पनि :अब चिसो मौसम सुरु हुन्छ। जाडोयाम लागेसँगै यससँग सम्बन्धित रोग हरु पनि देखिन थाल्नेछन्। विषेशत: गर्मी समयभन्दा जाडोमा बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई स्वास्थ्यमा बढी समस्या हुन्छ।
चिसोबाट जोगिन सकियो भने धेरै रोगबाट बच्न सकिन्छ।चिसोमौसममा देखापर्ने प्रमुख स्वास्थ्य समस्या;हिउँले खानु समस्या विशेषगरी हिउँ पर्ने ठाउँमा देखिन्छ। शरीरको कुनै पनि अंग धेरै लामो समयसम्म हिउँ वा चिसो पानीको सम्पर्कमा रहिरहे यो समस्या हुन सक्छ।
यसमा शरीरका मूल भागबाट टाडा रहेका अङ्गहरु खासगरी हातखुट्टाका औला, अनुहार, नाक, कान आदि हिउँले खान सक्छ। त्यसैले शरीरलाई हिउँ वा चिसो वस्तुबाट जोगाउनु पर्छ। यदि हिउँले धेरै खाएमा उक्त ठाउँलाई चिरेर फाल्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ।
फ्लु;फ्लु इन्फ्लुएन्जा भाइ रसबाट लाग्ने सरुवा रो ग हो।यो ए, बी, सी र डी गरी ४ प्रकारका हुन्छन्। इन्फ्लुएन्जा डी खासगरी गाईवस्तुमा मात्र सीमित देखिएको छ भने सी एकदम सामान्य हुने र महामारीको रूप लिँदैन भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ।
तर, ए र बी भने हरेक फ्लुको सिजनमा देखिने गरेको पाइन्छ।नेपालमा मनसुन सिजन र जाडो महिनाको सुरुवात र अन्ततिर बढी मात्रामा देखिने गरेको पाइन्छ।स्वाइन फ्लु, हङकङ फ्लु र बर्ड फ्लु फ्लुका उदाहरण हुन्।
सं क्र मित व्यक्तिले खोक्दा वा हाछ्युँ गर्दा अर्को व्यक्तिमा संक्र मण हुन्छ। त्यस्तै, संक्र मित व्यक्तिले प्रयोग गरेको सरसामान अर्को व्यक्तिले प्रयोग गरेमा पनि सर्न सक्छ।
भर्खरैको एक नयाँ अनुसन्धानले संक्र मित व्यक्तिले श्वासप्रश्वास मात्र गर्दा पनि फ्लु भा इरस सर्ने गरेको देखाएको छ।फ्लु फैलिसकेको अवस्थामा सकेसम्म सार्वजनिक स्थलहरूमा नजाने, नाक, मुख, आँखामा बारम्बार हात नलाने, संक्रमित व्यक्तिसँग अभिवादन गर्दा हात नमिलाउने, घर फर्केपछि राम्रोसँग हात-मुख साबुन पानीले धुने गर्नुपर्छ। संक्र मित व्यक्तिले हाछ्युँ गर्दा मुख छोपेर मात्र गर्नुपर्छ।
आफू सं क्रमित भएको अवस्थामा घरबाहिर नजाने र घरमा बस्दा पनि सकेसम्म घरका अन्य सदस्यभन्दा अलग्गै बसेमा संक्र मण सर्ने सम्भावना कम रहन्छ।
रुघाखोकी;जाडोयाममा शरीरमा भाइरस बढी स क्रिय हुने भएकाले रुघाखोकी बढी लाग्छ। रुघाखोकी मात्रै होइन योसँगै एल र्जी पनि हुन्छ।रुघाखोकीबाट बच्न बाटोमा हिँड्दा समेत धुलोबाट जोगिनेगरी मास्क लगाएरहने?र हिँड्नु पर्छ।
साधारण खाले रुघा छ भने घरेलु उपायले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। भाइरलको संक्र मण फैलिएको बेलामा विद्यालय जाँदा र अन्यत्र हिँड्दा जोगिनु पर्छ। साधारण खाले रुघाखोकीलाई घरमै उपचार गर्न सकिन्छ।
जाडोमा कसरी स्वस्थ रहने? न्यानो कपडा लगाउनुपर्छ।टोपी, मफलर, पन्जा र मोजा लगाउन बिर्सनु हुँदैन। विशेषगरी बाहिर निस्कदा सचेत रहनुपर्छ।बिहान पर्याप्त शारीरिक ब्यायाम गर्नुपर्छ।जाडोमा कम शारीरिक कसरत र बढी खाना खाइने हुनाले तौल बढ्ने सम्भावना हुन्छ। तौल नियन्त्रण गरी स्वस्थ रहनुपर्छ।
चिनीजन्य खाद्यपदार्थबाट जोगिनुपर्छ।पर्याप्त तातोपानी पिउन आवश्यक छ। चिसो मौसममा हामी पानी कम पिउने गर्दछौं।जसले गर्दा अन्य स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुनसक्छ।चिसोमा सारुवा रोगबाट बच्न सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ। नियमित साबुनपानीले हात धुने र शरीर फुर्तिलो राख्न बेलाबेलामा नुहाउनुपर्छ। चिसो पानी भन्दा मनतातो पानीले नुहाउनु राम्रो हुन्छ।यस्तै चिसोमा ओठ फुट्ने समस्याबाट बच्न लिपगार्ड लगाउनुपर्छ।
जाडोमा सबैभन्दा बढी श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या देखापर्छ। यस्तो बेलामा रुघाखोकीले ज्यादा सताउने गर्छ। हाच्छिउँ गर्दा नाकमुख छोपेको हात धुने, छुट्टै खालका रुमालहरू प्रयोग गर्नुपर्छ।
सं क्र मण भएको छ भने मास्क लगाएर हिंड्न आवश्यक छ।- मुटुका बिरामीहरुले जाडोमा बाधा पर्ने गरी शारीरिक काम गर्नु हुँदैन। बिहान-बेलुका बढी जाडो हुने भएकोले घरभित्रै बस्नुपर्छ।
Nextआज – ११ कार्तिक २०७७ मंगलवार को राशिफल